စည်သွတ်ဘူး အစားအစာ Tins စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China စည်သွတ်ဘူးခွံများ ထုတ်လုပ်သူများ
1. လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ အစားအသောက်ကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။အစားအသောက်သည် ကျန်းမာရေး စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
2. ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများ အထူးကောင်းမွန်သည်။
3. အတွင်းပိုင်းယွန်း: ရွှေ၊ အဖြူရောင်၊ အလူမီနီယံစသည်တို့။
နှစ်လွှာမြောက် သံဖြူဗူးများကို တံဆိပ်ရိုက်စက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံဘူးကိုယ်ထည်တွင် ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိဘဲ ဗူးများကို လွယ်ကူသောအဖွင့်အစွန်းများဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ပြီးနောက် 100% လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစေသည်။
စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, စိတ်ကြိုက် Tin Box, Tin Cosmetic Containers, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ, လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ,